उपचारमा अनुदानभन्दा रोग लाग्न नदिने वातावरण बन्नुपर्छ
डा. रिता थापा, जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ सरकारले जनस्वास्थ्य ऐनको तयारी गरिरहेको छ भन्ने सुन्दा निकै खुसी लागेको छ। लामो समय जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरेकाले पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले कुनै कदम चाल्नु खुसीको कुरा हो। परिभाषाबाट नै स्पष्ट हुन्छ, ‘जन–स्वास्थ्य’ भन्नासाथ आमजनताको स्वास्थ्यका लागि गरिने कामकारबाही। विश्वव्यापी मान्यताले पनि के देखाउँछ...
जनस्वास्थ्य ऐन कागजी अवधारणा होइन ‘लिभिङ डकुमेन्ट’ बन्नुपर्छ
डा. बद्रीराज पाण्डे, जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ सरकारले जनस्वास्थ्य ऐनका लागि मस्यौदामा गृहकार्य गरिरहेको छ। यो जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेकाहरुका लागि खुसीको कुरा हो। हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि एउटा विस्तृत जनस्वास्थ्य ऐनको आवश्यकता छ। विभिन्न मुलुकमा जनस्वास्थ्य वा यस्तै नामका ऐनहरु जारी भइसकेका छन्। १९औं शताब्दीकै मुलुकी ऐनबाट...
किन एक हुँदैछन् गोरखाहरु ?
नरेश खपाङ्गी मगर फुट र विभाजन गोरखा आन्दोलनको पर्याय नै हो । जहिले पनि फरक-फरक किनारामा रहेर धारणा सार्वजनिक गर्नु गोरखाहरुको सन्दर्भमा नयाँ होइन । बेलायतको विरोध गर्नुमा भन्दा एकले अर्कालाई खोइरो खन्दै गाली बेइज्जतीकै स्तरसम्म ओर्लनुमा उनीहरुले बढी समय बिताएका छन् भन्नुमा अन्यर्थ नहोला । त्यतिमात्र होइन, आफ्नै समुदाय भित्रका भिन्न संगठनका नेतालाई कुटपिटसमेत...
मधुमेहसँग जोडिएको मानसिक स्वास्थ्य समस्या
डा. प्रमोदराज रेग्मी आजकल मधुमेह (चिनीरोग वा डायबेटिज) को नाम नसुन्ने कमै होलाऔँ। हाम्रो परिवार वा छिमेकमा कसै न कसैलाई मधुमेह भएको हुन्छ। खासगरी पछिल्ला केही दशक यता विश्वव्यापी रुपमा नसर्ने रोगहरु जस्तैः मधुमेह, क्यान्सर, मुटुसम्बन्धी रोगहरुको प्रकोप बढिरहेको पाइन्छ। मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन (जस्तैः खानपिन, कम शारीरिक अभ्यास आदि) तथा वंंशाणुगत गुणका कारण...
डा. सबिना भट्टराई – अनुहार सफा हुनु भनेको स्वस्थ हुनुको संकेत हो । तर अनुहारमा चायाँ आउँदैमा शरीर अस्वस्थ हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन । तर शरीर अस्वस्थ छ भन्ने संकेत अथवा लक्षण भनेको अनुहारमा चायाँ देखिनु पनि हो । अनुहारमा मात्र किन चायाँ आउँछ ? चायाँ पोतो आउने धेरै कारण हुन्छ । पहिलो कारण भनेको घामको असर हो । घाममा छालालाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने एक प्रकारको किरण हुन्छ...
छोरी जन्मिँदा किन खुम्चिन्छ महिलाकै अनुहार?
मान्छेको भीडमा मैल देखेकी नारी पात्र कहिले सशक्त छिन् त कहिले अशक्त। प्रसव पीडामा छट्पटिएर मित्युसँग युद्ध गरी मान्छेले मान्छे जन्माउँदाको क्षणमा लाग्छ नारी शक्ति अपरम्पार छ। लाग्छ, नारी सहनशीलताकी प्रतिमूर्ती नै हुन्। नर्सिङ पेशामा भएकाले सबै कुरा पेशागत रुपले हेर्दा प्रसूतिको क्रम प्राकृतिक प्रक्रिया लाग्नुपर्ने हो। तर त्यसबेलाको नारी स्वरुप देख्दा आफूलाई...
निजी क्षेत्रमा लुटको वातावरण बनाइनु हुँदैन
डा. अञ्जनीकुमार झा पछिल्ला केही वर्षमा स्वास्थ्यप्रति आमनागरिकको सचेतना बढेको छ। गाउँगाउँका मानिस पनि स्वास्थ्यप्रति सचेत हुन थालेका छन्। मानिसले पहिलेजस्तो संक्रामक रोगको शिकार हुनुपरेको छैन। यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, ऐन/कानुन र पूर्वाधार पनि तयार गर्न जरुरी छ। यी तीन पक्षलाई सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा जनस्वास्थ्य प्रवर्धनमा सरकारले मुख्य भूमिका...
सेवा दिने र लिने दुवैको अधिकार कानुनमा परिभाषित हुनुपर्छ
डा. पदमबहादुर चन्द केही वर्ष पहिलेदेखि नै जनस्वास्थ्य ऐनका लागि गृहकार्य सुरु भएको थियो। स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गर्न, गुणस्तरीय बनाउन र अनुगमन गर्न कानुनी पूर्वाधार आवश्यक पर्ने महसुस गरेर सरकारले जनस्वास्थ्य विधेयकको गृहकार्य गरेको हो। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस कामलाई प्राथमिकतामा राखेर गृहकार्य थालेको छ। यसको सामान्य मस्यौदा बनाउने काम सम्पन्न भए पनि...
डा. शेखर कोइराला झण्डै सात दशकसम्म देश र प्रजातन्त्रका लागि लडेको कांग्रेस आज इतिहासको संगीन मोडमा आइपुगेको छ । एक वर्ष अघि सम्पन्न १३ औ महाधिवेशन पछि पार्टीलाई पुनःजीवन दिने संकल्प र प्रतिबद्धता सभापतिज्यू र हामी सबैले गरेको तथ्य पुनःस्मरण गराउन चाहन्छु । यो एक बर्षको वीचमा सकारात्मक र आशा लाग्दा कामहरू पनी भएका छन् । लामो समयदेखि हुन नसकेको भातृ संगठनहरूको अधिवेशन...
नर्सिङ पेशालाई महिलाको पेवा किन बनाउने?
सुजता अधिकारी, नर्स नर्सिङ पेशामा पुरुषलाई पनि सामेल गर्नुपर्ने सम्बन्धमा समाचार पढ्न पाँउदा खुसी लागेको छ। एउटा नर्सको नाताले यो विषयमा केही लेख्न मन लागेको छ। नर्सिङ पेसामा पुरुषलाई कोटामा पढाइनु राम्रो सुरुवात मान्छु म। सुरुमा पुरुषलाई १० प्रतिशत कोटामा नर्सिङ शिक्षा पढाउनुपर्ने सुझाव स्वागतयोग्य छ। पुरुष नर्स आजको आवश्यकता पनि हो। सबै पेशाको आफ्नै छुट्टै...
'रेफर'मार्गमा हिँडेका हामी जिल्लाका डाक्टर
डा. शम्भु खनाल एमबिबिएस पास गरेपछि तेस्रो वर्षमा हिँडिरहेको छु म। म पनि हिँडिरहेको छु, मैले काम गर्ने निकाय पनि हिँडिरहेको छ। खासमा घिस्रिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन। तर, कागजमा चाहिँ खुब दौडिएजस्तो देखिन्छ। यथार्थमा चाहिँ हिँडेजस्तो मात्र छ। म समयसँग दौडनुपर्छ भन्छु, दौडिन खोज्छु। रफ्तार बढाउन खोज्छु। तर, मेरो सरकारी अड्डा सधैँ लुखुरलुखुर उही गतिमा हिँडिरहन्छ।...
डा. अरुणप्रसाद ढुंगाना – काठमाडौंमा अहिले जताततै धुवाँधुलो बढेको छ । यसले वातावरणलाई त असर गरेकै छ नै । मानिसको स्वास्थ्यलाई पनि जोखिम बढाएको छ । धुवाँधुलोले आँखालाई झन् बढि असर गरिरहेको छ । आँखाको परेलामा धुलो जम्ने र त्यसले इन्फेक्सन गराउने गर्दछ । आँखाको किनारामा धुलो टाँसिदा आँखा सुनिन सक्छ । धुलोले आँखाको बाहिरी भागको पातलो झिल्लीमा मासु पलाउने समस्या पनि...
अफ्रिकाका काला जाति र एसियाका दलित
रमेश विश्वकर्मा विभेद यस्तो विष हो, जसले सम्मानका साथ बाँच्न र मर्नसम्म पनि दिँदैन । मानव जातिमाथिको यही विभेदलाई निर्मुल गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघ र यसका सदस्य राष्ट्रहरुले रंगभेद उन्मुलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस प्रत्येक वर्ष विश्वभरि मनाउने गर्छन् । २१ मार्चमा ५१ औं रंगभेद उन्मुलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विश्वभर मनाइँदै छ । प्रसंग अफ्रिकाको अफ्रिकी...
एउटा डाक्टरको बकपत्र : सरकार! बेइमान हुनबाट जोगाऊ
डा. अशोक चापागाईं सरकारी जागिरे भन्नासाथ दिमागले एउटा चित्र तयार पारेको थियो। भुँडी ठूलो भएको, काम केही नगर्ने तर सँधै ब्यस्त छु मात्र भन्ने, पाएसम्म घुस खाने, अनि दौरासुरुवाल र ढाका टोपी ढल्काउँदै उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार थाप्न तम्सिने। यस्तैयस्तै विशेषता जोडिदिने गरेको थिएँ मैले सरकारी जागिरेलाई। हुन पनि गाउँघर, पत्रपत्रिकाहरुमा सरकारी जागिरेबारे यस्तै सोच...
'जिन्दगीमा यो भुँडी भन्ने कुरा एकपटक लागेपछि लाग्यो लाग्यो, कसै गरे पनि उन्मुक्ति नपाइँदो रहेछ।' डाक्टर'साब झसङ्ग बिउँझिए। उनलाई आफ्नै तस्वीर बोलेजस्तो लाग्यो। अँध्यारोमा छामछुम गरे अनि आफ्नो 'सामसुङ ग्यालेक्सी जे-सेभेन'को पावर बटन दबाए। रातको १ बजेको रहेछ। छेवैमा म्याडम घुरिरहनु भएको थियो। डिस्टर्ब होला कि भनेर डराउँदैडराउँदै, डाक्टर'साब सरक्क...